नेपाल बाहिरिएपछि जब शीतल निवासमा ओली पुगे ! – Nepali online news portal
नेपाल बाहिरिएपछि जब शीतल निवासमा ओली पुगे !
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०७:४२ May 7, 2021 पाथिभरा संवाददाता
काठमाडौं । सत्तारूढ एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बिहीबार अलगअलग भेट गरेका छन्।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले पटकपटक बोलाउँदा पनि राष्ट्रपति कार्यालय नगएका नेता नेपाल बिहीबार साँझ त्यहाँ गए।
भेटमा पार्टीभित्रको विवादका बारेमा कुराकानी भएको स्रोतले बतायो। नेता नेपालले पार्टीको विवाद मिलाउन ओलीले गरेका निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका थिए। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फर्किने क्रममा नेपाल शीतल निवास पसेका थिए।
नेता नेपाल शीतल निवासबाट बाहिरिएलगत्तै ओली त्यहाँ पुगेका थिए। स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि दिउँसो शीतल निवास गएका ओली साँझ पनि राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकेर साँझ राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास गएका हुन्।
साँझको भेटमा एमालेभित्रको विवादबारे कुराकानी भएको राष्ट्रपति निकट स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट
‘आफैँ घण्ट हल्लिने’ मन्दिरको यस्तो छ दिव्यशक्ति
मौसममा क्रमिक सुधार
अमेरिकामा एकैदिन १.३६ लाख कोरोना संक्रमित थपिए
भक्तपुरमा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ५ सय ३५ नियन्त्रणमा
कोरोना अपडेटः विश्वभरी दुई करोड २२ लाख संक्रमित, एकै दिन साढे दुई लाख थपिए
संक्रमण भयावह हुने संकेत
१सभापति देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच देउवा निवासमा भेटवार्ता
२कोरोना संक्रमणबाट बाँकेमा एकै घरका तीन दाजुभाइको मृत्यु
३उपत्यका कोरोना अपडेट : एकै दिन ४ हजार भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
४कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन ५० जनाको मृत्यु
५एकैदिन देशभर थप ९ हजार १९६ जनामा संक्रमण
६कोरोना महामारीमा निजी अस्पतालको कमाउ धन्दा
७एमालेमा विवाद मिलाउन दौडधुप, नेपाल पक्षमाथिको कारबाही फुकुवाको संकेत
८संक्रमण भयावह हुने संकेत